118% Gibraltar vita vaksiny dia nanafoana ny Krismasy noho ny fipoahan'ny COVID-19 vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » 118% Gibraltar vita vaksiny dia nanafoana ny Krismasy noho ny fipoahan'ny COVID-19 vaovao
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Entertainment • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
118% Gibraltar vita vaksiny dia nanafoana ny Krismasy noho ny fipoahan'ny COVID-19 vaovao.
Maherin'ny 118% amin'ny mponin'i Gibraltar no vita vaksiny tanteraka amin'ny Covid-19, ka mihoatra ny 100% io tarehimarika io noho ny fatra omena ny Espaniola izay miampita sisintany hiasa na hitsidika ny faritany isan'andro.
Efa vita vaksiny tanteraka nanomboka ny volana martsa 2021 ny mponina olon-dehibe iray manontolo ao Gibraltar.
Mbola ilaina ny saron-tava any amin'ny fivarotana sy amin'ny fitateram-bahoaka any Gibraltar.
Toy izany koa ireo firenena vita vaksiny tsara dia nitatitra ny fiakaran'ny otrikaretina Covid-19 tato ho ato.
Nanambara ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemantan'i Gibraltar fa nofoanana avokoa ny fety Krismasy ofisialy, ny lanonana ofisialy ary ny fivoriana mitovy amin'izany.
Notoroana hevitra mafy ihany koa ny vahoaka amin’ny ankapobeny mba hialana amin’ny hetsika ara-tsosialy sy lanonana mandritra ny efatra herinandro ho avy. Ho an'ny hetsika ataon'ny vondrona rehetra, ny toerana ivelan'ny trano dia asaina mihoatra ny ao an-trano, ny fikasihana sy ny famihina dia kivy, ary ny fanaovana saron-tava.
Ny mponina rehetra mahafeno fepetra ao Gibraltar dia vita vaksiny, saingy ao anatin'ny firongatry ny tranga COVID-19, Gibraltar Tsy manararaotra ny hetsika Krismasy ny tompon'andraikitra.
"Ny fitomboan'ny isan'ny olona manao fitiliana tsara ho an'ny COVID-19 tato anatin'ny andro vitsivitsy dia fampahatsiahivana mafy fa mbola miparitaka be ny viriosy eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika ary andraikitry ny rehetra ny mitandrina tsara rehetra mba hiarovana ny tenantsika. ireo olon-tianay, ”hoy ny minisitry ny fahasalamana Samantha Sacramento.
Gibraltar, Faritany Britanika kely any ampitan-dranomasina mizara sisin-tany amin'ny Espaina, dia nahitana tranga 56 COVID-19 isan'andro tao anatin'ny fito andro farany, raha latsaka ny 10 isan'andro tamin'ny Septambra. Ny fiakaran'ny tranga, izay nofaritan'ny governemanta ho 'exponential,' dia tonga na dia eo aza i Gibraltar manana tahan'ny vaksiny ambony indrindra eran-tany.
Maherin'ny 118% amin'ny mponin'i Gibraltar no vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19, ka mihoatra ny 100% io tarehimarika io noho ny fatra omena ny Espaniola izay miampita sisintany hiasa na hitsidika ny faritany isan'andro. Ny olon-dehibe rehetra ao Gibraltar dia efa vita vaksiny tanteraka nanomboka tamin'ny volana martsa, ary mbola ilaina ny saron-tava any amin'ny fivarotana sy amin'ny fitateram-bahoaka.
Gibraltar amin'izao fotoana izao dia manome fatra booster ho an'ny 40 taona mahery, mpiasan'ny fahasalamana ary 'vondrona marefo' hafa, ary manome vaksiny ho an'ny ankizy eo anelanelan'ny dimy sy 12 taona.
Ireo firenena vita vaksiny tsara dia nitatitra ihany koa ny fiakaran'ny otrikaretina COVID-19 tato ho ato.
Tany Singapore, izay nahitana ny 94% amin'ny mponina mendrika, dia nitombo ny tranga sy ny fahafatesan'ny olona ambony indrindra tamin'ny faran'ny volana Oktobra, ary nihena kely avy eo.
Any Irlandy, izay manodidina ny 92% amin'ny olon-dehibe no vita vaksiny tanteraka, ny raharaha COVID-19 sy ny fahafatesan'ny otrikaretina dia nitombo avo roa heny nanomboka tamin'ny volana Aogositra.
November 23, 2021 amin'ny 20: 22
Tsy misy manafoana ny Krismasy any Gibraltar. Vaovao sandoka adala izany. Nambaran’ny minisitra marina izany tamin’ny vaovao vaovao satria hitany izay lazain’ny olona moana momba izany
BOOSTER-ul FUNCȚIONEAZĂ DE MINUNE DAR NUMAI DUPĂ CE FACI VREO 7: Gibraltarul vaccinat în proporție de 118% anlează Crăciunul din cauza unui nou focar de COVID-19 – Mucenicul's Blog hoy:
November 17, 2021 amin'ny 14: 27